माेदी ‘इन्ट्रेस्ट’ : ओली कि हिन्दु धर्म? « AayoMail
बुधबार, २० साउन २०७८
नेपाली मार्केट टेक खबरपालिका फ्याक्ट चेक सम्पादकीय भिडियो एक्सप्लेनर फुर्सद सञ्जीवन हेल्थपोस्ट पेडपोस्ट युनिकोड
माेदी ‘इन्ट्रेस्ट’ : ओली कि हिन्दु धर्म?
2021,17 June, 5:42 pm
उमेशजी, नयाँ जोगीले जस्ताे धेरै खरानी घस्नुभयाे कि!
माननीय राज्यमन्त्री श्रेष्ठज्यू! तपाईंको नियुक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री पत्नीको भूमिकालगायत अन्य
भ्याक्सिन : काेरोनाविरुद्ध ‘रामवाण’ हाेइन
सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, भ्याक्सिन कोरोना संक्रमण
राजनीतिक व्यापारी र डनवाद
तर नेपालमै एकथरि ठूला व्यापारी घरानाहरुको बढदो प्रत्यक्ष राजनैतिक प्रभावका
कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४२ लाख ८ हजार नाघ्यो
जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयले दिएको पछिल्लो विवरणअनुसार विश्वभरमा ४२ लाख ८ हजार ५५५ जनाको मृत्यु भएको छ। विश्वभरी कूल संक्रमितको संख्या १९ करोड ७३ लाख ६८ हजार ३१० रहेको छ।
अन्ततः न्याय मरेन
माफियातन्त्रको ‘नाइके’ ओली नै होइनन्?
शपथमा लतपत : हेर्नेलाई नै लाज
देशमा अहिले युट्युबरहरूको बाढी आएको छ। नयाँ-नयाँ क्रान्तिकारी, विचारक, स्वप्नद्रष्टा, भविष्यद्रष्टा जन्मिएका छन् यूट्युबमार्फत्। दुर्भाग्य, आफू पनि फेसबुक प्रयोगकर्ता भएका कारण यिनले क्यामेरासामु गरेको निम्नकोटिको प्रहसन हेर्न बाध्य छु। काेही काेहीले त रेकर्डिङको लिंक नै पठाएर हेरिदिने अनुरोधका साथ कमेन्ट गर्न पनि अनुरोध गरेका हुन्छन्।
यी सबैको आशय मुलुकमा परिवर्तन आवश्यक भएको र त्यो अति शीघ्र नै आउने दाबी हुन्छ र यिनका भिडियोमा राष्ट्रप्रेमका अनेकाैं सदबिऊ छरिएका हुन्छन्।
भूमिकामा धेरै समय, स्थान र श्रमको विनियोजन नगरी मूलकै समाधान गरौं। अहिले राजा आऊ, देश बचाऊको जयगान गर्ने केही व्यक्ति वा समूहप्रति आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ। यस्तो हुनु अस्वाभाविक किमार्थ पनि होइन। जब कुनै व्यवस्थाका संवाहकहरू सारा संयन्त्रको उपयोग (प्रयोग फगत आफ्नो स्वार्थ सुविधा र पक्षपोषणका लागि गर्न थाल्छन्) त्यसबेला पूर्वको व्यवस्थाका स्वनामधन्यगण एवं दोहनको अवसर नपाएका व्यक्ति अथवा समूह त्यस व्यवस्थाको मलामी भई शवदाह हेतु अग्रसर हुन्छन्।
पुनः मूलकै विश्लेषण गरौं। के वर्तमानको व्यवस्थाको अन्त्य अथवा स्वरूप परिवर्तन भई देश नयाँ कोर्समा जान सक्छ? पूर्वराजाका हजार, दुई हजार शाश्वत समर्थक र वर्तमानका केही सय असन्तुष्ट व्यक्तिहरूको सामूहिक प्रयासले राजाको नाम अगाडि थपिएको ‘पूर्व’ शब्द तिरोहित हुने सम्भावना यथार्थमा बदलिन सक्छ?
पूर्वराजासँग संयोगले गत ११ अप्रिलका दिन हरिद्वारको महाकुम्भमा भेट भएको समाचार (फोटो नेपाली पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएपछि) त्यस भेटले अनाहकमा महत्व पायो। कुनै ठूलो घटना अथवा प्रसंग थिएन त्यो। घटना यतिमात्र हो, पूर्वराजा हरिद्वार पुग्नुभएको थियो, म हरिद्वारमा थिएँ। आगमनबारे थाहा पाएर हेर्न गएको थिएँ।
त्यो त भारतीय ‘होस्ट’ स्वामी कैलाशानन्दकाे मप्रतिको स्नेह र विश्वासका कारण पूर्वराजासँग भेट्ने र केही घन्टासँगै हुने अवसर पाएँ। धर्मनगरी हरिद्वारमा उहाँसँग धर्मबाहेक अन्य केही कुरा भएन।
यस घटनालाई लिएर मसँग नेपाली राजनीतिबारे अनेकन प्रश्न गरिन्छन्, के राजाको पुनरआगमन हुन्छ देशमा?
यस प्रश्नको मसँग कुनै जवाफ छैन, परन्तु मसँग आफैं प्रश्न छ। के यी युट्युबरहरूका साथ मनोवार्ता गर्दै रमाइरहेका मित्रहरूले भने झैं देशमा केही परिवर्तन हुन्छ?
वर्तमानको विश्लेषण गर्दा देशमा परिवर्तन गर्न इच्छुक एकजना मात्रै देखिनुहुन्छ। दुःखका साथ भन्नु पर्छ त्यो पात्र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह होइनन्। वर्तमानको व्यवस्था र संविधानले देशको हित गर्दैन भन्ने बोध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाहेक कसैसँग छैन। दरबारिया र नवदरबारियाहरूको यो बोध, बोध नभएर सत्ताका छेउछाउ पुग्ने प्रयत्न मात्रै हो।
जहाँसम्म मलाई ज्ञात छ, भारतको इन्ट्रेस्ट (मोदी-अमित शाहको) नेपालमा हिन्दु धर्म स्थापनामात्रै हो। योगी आदित्यनाथको अलि-अलि इन्ट्रेस्ट राजाप्रति भए पनि उहाँ भारतको केन्द्रीय राजनीतिमा अहिले त्यो पकड राख्नुहुन्न। उहाँको आफ्नै करिअर अहिले सुनिश्चित छैन। २०२२ मा उत्तर प्रदेशमा हुने प्रान्तीय चुनावमा भाजपाको बहुमत आए र केन्द्रीय नेतृत्वले उहाँलाई नै प्रदेशको बागडोर जिम्मा लगाए मात्रै उहाँको हैसियत स्थापित हुन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतको यो इन्ट्रेस्ट थाहा छ। चतुर ओलीजी भारतको यस इन्ट्रेस्टका साथै आफ्नो इन्ट्रेस्ट पनि पूरा गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँ धर्मनिरपेक्षता मात्रै होइन गणतन्त्र, संघीयता नै विसर्जन गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ। उहाँको यस चाहनामा अपरोक्ष रूपले कतै न कतै ज्ञानेन्द्र शाहको भलो निहित छ।
नेपालमा परिवर्तन आयो भने त्यसको एकमात्र श्रेय केपी ओलीलाई जान्छ। अचम्म त के भने ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थकहरू खुलेर भारत र केपी ओलीको विरुद्धमा विषवमन र विरोधको शैली प्रदर्शित गरिरहेका छन्। यिनीहरूको राजनैतिक अपरिपक्वता हेरेर बिहेपूर्वको कालिदासको सम्झना आउँछ। यदि तपाईं १२ बुँदे सम्झौताको, वर्तमान संविधानको, धर्म निरपेक्षताको, गणतन्त्रको, संघीयता आदि कुप्रथाको आलोचक अथवा विरोधी हुनुहुन्छ भने तपाईंले केपी ओलीबाहेक कसैको समर्थन गर्नु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नुसरह नै हो। ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थकहरूले पनि यो कुरा जति छिट्टै आत्मसात गरे त्यति भलो हुन्छ।
मुलुकमा व्याप्त कुरीति, कुप्रथाको अन्त्य गरी परिवर्तन चाहनेहरूले ओलीको पक्षमा एवं यथास्थितिका समर्थकहरूले उनका विरुद्धमा लामबद्ध हुनु अपरिहार्य छ। यथास्थितिका पक्षधर एकजुट भइसकेका छन्। पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्री मात्रै होइनन्, युरोपियन युनियन पोषित तमाम वर्ग ओलीविरुद्ध एकजुट भएका छन्। यता परिवर्तनका आकांक्षीजनहरू भने ओलीमाथि नै प्रहार गर्न तल्लिन छन्।
ओली एक्लिँदै गएको यथार्थ इन्कार गर्न सकिँदैन। माधव पक्षसँग एक्लै पौडिने सामर्थ्य नभए पनि आफू डुब्ने र ओलीलाई डुबाउन सक्ने क्षमता छ। अदालतमा विचाराधीन रहेको संसदसम्बन्धी मुद्दाको फैसला जुनरूपको पनि आउने सम्भावना छ। फैसला ओलीको खिलाफ आएको खण्डमा निश्चय पनि ओलीको बहिर्गमन हुने वातावरण हुन्छ। यसैलाई मध्यनजर गरी ओली माधव पक्षसँग लचिलो भएर पेस भइरहेका छन्।
माधव-ओलीको एकता अथवा सहकार्य अदालतको फैसलामाथि नै निर्भर छ। फैसला ओलीको पक्षमा आयो भने माधवले मिले पनि, नमिले पनि ओलीकै हालीमुहाली कायम रहन्छ। तर, संसद पुनर्स्थापना भए माधवसँग मिले पनि नमिले पनि दुवै अवस्थामा ओलीको स्ट्रेन्थ कमजोर हुन्छ। ओली कमजोर हुनासाथ परिवर्तनका सबै सम्भावनामा तुषारापात हुन्छ। हिन्दु धर्म स्थापनाका त अनेकाैं ‘रोडम्याप’ छन् तर, ज्ञानेन्द्र शाहको पुनरागमनको सपना भने तुहिन पुग्छ। दरबारिया-नवदरबारियाहरूले यस सत्य-तथ्यमाथि विचार नगरेको देख्दा अलौकिक आश्चर्य हुन्छ।
कोरोना उपचारमा बढी शुल्क असुल्ने निजीलाई छैन कारबाही, मन्त्रालयकै कर्मचारी…
'धेरैजसो मन्त्रालयका चिकित्सकहरु निजी अस्पतालमा काम गर्ने गरेका छन्। जबसम्म एक चिकित्सक एक अस्पतालको नियम लागू गरिँदैन तबसम्म समस्या समाधान
क्रिकेटको बन्द प्रशिक्षणका लागि १९ खेलाडीलाई बोलाइयो
१९ सदस्यीय क्रिकेट टोलीलाई बन्द प्रशिक्षणका लागि बोलाइएको छ। ओमानमा हुने आइसिसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लिग-२ को ट्राई सिरिजका लागि
झापामा दैनिक कोरोना संक्रमण दर ३५ प्रतिशतभन्दा बढी
झापा – झापामा कोरोना संक्रमण दिनदिनै बढ्दो छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमण दर ३५ प्रतिशतभन्दा बढी छ। यो देशभरकै उच्च संक्रमण
झापामा जटिल बन्दै अवस्था : कोरोना संक्रमितले भरिए अस्पताल
विज्ञहरुले कोरोनाको तेस्रो लहर छिट्टै आउने चेतावनी दिइरहेका बेला झापाका कोभिड अस्पतालहरु संक्रमितले भरिभराउ भएका छन्।